Oromo Views & Headline News: Seenaa Gabaabaa Goticha Jaal Lagasaa Waagii Meetta
qabso 10:36 PM
Baay'ee baay'een guddun gadda garuu haala qabso keessa Ajjesuuf wareegamun wanuma jiru dha .Dutni gootichaa oromoo dhabuun keenya waan heddu nama gaddisisuu dha.
Jechuma maammodhan of jajabisana
galatooma seena isaa waan nuu dhiheessitanif.
Qabsa'a dhugaan hangaa du'atti
abdi 6:24 AM
seenaa laggasaa wagii dhaga'uun gaarii dha;gaaruu nutii immoo laggasaa biraa ta'uu qabna!!
laggasaa biraa ta'uu qabna!!!
I have really felt sick since the event was fresh till now.
Galatoomaa! Seenaa yaadatamuu qabu akkasii kana maxxansuu keessaniif. Qabsoon itti fufa, Oromiyaan in biliisomti. Gootota qabsoof wareegaman akkasii kana yaadachaa qabsoo isa qabnee jirru sirriitti itti haa cichinu. Garuu waan baayyee na gaddisiisen isinitti hima. Qabsoo laafaan isin irratti arge. Innis maali yoo jettan dogoggora keesan duwwaa dha. Attamittiin maxxansa amma kana ga'u qubee Afaan Oromoo dogoggoraan barreessitu? Mee irra deebi'aa ilaalaa. Bayyee nama qaanessa, baayyee nama gaddisiisa, umna nama buusa. Gara fuula duraatti barumsa isiniif haa ta'u. Beektonni Oromoo guutanii jiru. Itti fayyadamaa, ofiis baradhaa. Afaan kan biraayyuu itti rakkachaa turtani. Attamitti Afaan Oromoo akkas mijatu kun isin dhiba?